DAAWO 2017 Muuqaal Cusub oo ku saabsan ka hortaga Abaaraha, kana qayb qaado intii karaan´kaada !! | kowtharmedia.com
Home ARRIMAHA BULSHADA DAAWO 2017 Muuqaal Cusub oo ku saabsan ka hortaga Abaaraha, kana qayb qaado intii karaan´kaada !!
DAAWO 2017 Muuqaal Cusub oo ku saabsan ka hortaga Abaaraha, kana qayb qaado intii karaan´kaada !!
Jan 23, 2017ARRIMAHA BULSHADA, HORUMARKA DALKA, MAQAALO, MUUQAAL, WACYIGELIN, WARAR KALE
Waxaanu halkaan Idiin kuugu soo gudbinaynaa Muuqaal gaaban oo Xanuun leh oo kuna saabsan Abaaraha Dalka Kajira oo xilligaan Malaayiin xoolo ah ee ku dhinteen waxaana taas usabab ah Ceelalka oo aan loogu waraabin beeraha lagu beeri karo Cuntooyinka ee cunni lahaayeen Dadka iyo Xoolaha Soomaaliyeed. waxaana dhibaataan usabab ah Ceelal la´aan iyo Tubbooyin la´aan.
Markii Dhul beeraha Dalkayna xilligaan jiilaalka ah lagu waraabiyo Ceelal biyoodyo waxaa lagu abuuri karaa Galay, Massago, Diir, Qamaddi iyo Cawsh ama Cows kaas oo lasii´san kara Xoolaha Badan oo Sanadkaan ee Abaarahu dhameeyeen.
Muuqaalkaan Daawo waxaana lagaa doonayaa in aad taa kulayn gaysatiin, hadba intii aad awoodaan yaana lookala harin Fadhi majiryee tan waa musiibo, kana qayb qaata Sammata bixinta Dadka Dhiban iyo Xoolaha loo waayay waxay Cunaan.
Previous PostQaybtii Labaad ee Sidee loo tigsadaa nolol dhab ah? Ciwaanada buuga wuxuu ka kooban yahay 27!! Next PostXiliga la magacaabayo guddiga doorashada Madaxweynaha Somalia oo la shaaciyey!!